bedava deneme bonususlot siteleribitcoin bahisvurkacbahis.comsupertotovip.comtipobetm.combetturkeygiris.orgvenusbetgiris.netKralbet Girişkralbetz.com Wannabe – Gold Channel Movies
1Season 1 May. 10, 2022
Episode1 May. 10, 2022
Episode2 May. 11, 2022
Wannabe (Fan Kla Ba Dang)
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ငယ်စဉ်ဘဝတုန်းက နာမည်ကြီးဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိခဲ့ကြစမြဲပါ။ အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် VIU Original ဇာတ်လမ်းတွဲ Wannabe မှာတော့ လူငယ်ဘာဝ နာမည်ကြီးနိုင်ဖို့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ကြိုးစားနေကြတဲ့ လူငယ်လေး ငါးယောက်အကြောင်းကို ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Underground မှာနေနေရာကနေ အွန်လိုင်းပေါ်ကို အဖေ‌အကြောင်း diss တဲ့ Hip-hop သီချင်းတင်လိုက်ရာက နာမည်ကြီးသွားတဲ့ KHA 22 အဖွဲ့က Rapper နှစ်ယောက် Puen၊ Rang နဲ့ Vocalist ကောင်မလေး Wine။ သူတို့ရဲ့ မကောင်းသတင်းနဲ့ ကျော်ကြားမှုကြီးက သူတို့လိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မှုဆိုတာကို ပေးနိုင်ပါ့မလား။ သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာကရော စစ်မှန်ပါ့မလား။
တစ်ဖက်မှာလည်း Thammasat Uni မှာ ဥပဒေကျောင်းတက်ဖို့ အမေ့သဘောအတိုင်းပြင်ဆင်နေရင်းက နာမည်ကြီး Idol ဖြစ်ဖို့ Idol ပြိုင်ပွဲကို အမေမသိအောင် ခိုးပြိုင်ပြီး အိပ်မက်နောက်လိုက်သွားတဲ့ Maam နဲ့ Maam ကို တစ်ဖက်သတ်ကြိုက်နေပြီး သူလုပ်ချင်တာလုပ်ခွင့်ရအောင် ကူညီပေးတဲ့ Wang။ သူတို့ကရော ရင်ထဲက အိပ်မက်တွေကို ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်ကြမလဲ။ Wang ရဲ့တစ်ဖက်သတ်အချစ်ကရော အခက်အခဲ‌တွေ၊ ကုန်းတိုက်မှုတွေကြားမှာ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ပါ့မလား။
သာမန်ထိုင်းအချစ်ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ အရသာမတူဘဲ လူငယ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့် ဒီ Hip-Hop Musical Drama ကား‌လေးကို အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ညတွေမှာ GCverse တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့ မယ်ဥလေးက မှာချင်ပါတယ်နော်။
Reviewed by Egg
Translated by MT, Egg, Taki
Original title Wannabe
First air date May. 10, 2022
Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/goldchannel/wp-includes/plugin.php on line 441